Misy zavatra momba ny trano miloko isan-karazany sy ny quaint, cobbled arabe ny Cremieux eny an-dalana izay mahatonga mametraka ny fakan-tsary teo azo atao! Zavatra tsy tsara tarehy no nilahatra an-dalambe Paris izay ahitana fitambaran amin'ny pinks, anana, mavo, ary manga, misy loko mifanaraka misy akanjo fa tsy maintsy atao sary tsimoka. Ataovy izany ho an gram, ry zalahy!
Via Toledo dia làlana taloha ary iray amin'ireo làlana lehibe ilaina amin'ny fivarotana ao an-tanànan'i Naples, Italia. izany 1.2 kilaometatra avy eny an-dalana dia iray amin'ireo tsara tarehy indrindra Streets In Eoropa. Izany dia manomboka amin'ny Piazza Dante ary mifarana amin'ny Piazza Trieste y Trento, akaikin'ny Piazza del Plebiscito.
Ivy nanarona trano sy ny miafina tohatra. Kynance Mews in Kensington dia ny tsara tarehy indrindra lavitra Streets In Eoropa. In autumn, glows eny an-dalana miaraka amin'ny ravina maitso sy Bourgogne,, ary rehefa tonga ny lohataona, ny trano hivadika ho volomparasy ala. Ity faritra ao London dia misy ny hevitra mpitoraka blaogy any an-danitra!
Ny rindrina fotsy no nilahatra tamin'ny maro, rustic feno voninkazo vilaniny fandraofan-davenona sy ny carnations Geranium, manome be voninahitra Pop ny loko ho tena manokana ity ampahany amin'ny tanàna. Miaraka sy ny tery, cobbled rihana, andohalambo vato, ary mazava ho azy ny haingon-trano rindrina tsara tarehy, ny Mezquita Cathedral ao amin'ny fomba fijery avy eo anelanelan'ny rindrina hampisy koa ny tonga lafatra any amin'ny iray efa tanteraka sary.
Atsofoka ao a toradroa kely akaikin'ny Primrose Hill, ho hitanao ny iray amin'ireo làlana mahafinaritra indrindra any Eropa ary koa ny indrindra Instagrammable! Alao sary iray andalana tsara tarehy miloko tanora townhouses izay mitsangana ambony, curving manodidina ny kely, maitso valan-javaboary izay Chalcot Square. Izany dia vato manary avy Regents Park sy ny malaza Camden Market.
Ankafizo hoe nandeha nidina Edinburgh cobbled Victoria Street feno fahafinaretana, tsy manam-paharoa toeram-pivarotana, ary eateries. Victoria Street dia tapa-mafy orina ny tantaran'ny tanàna sy ny manda vato sy ny hatsarany antitra mandrakizay hisarihana mpitsidika manerana. Ataovy azo antoka ianao mandeha nidina ho any amin'ny Grassmarket izay Avy any amin'ny taonjato faha-14 sy nivarotra ny fananany ao an-toerana isan-karazany ny vokatra sy potika haka.
Nyhavn dia nanisy marika ny boaty noho ny làlambe amoron-tseranana tonga lafatra izay mipoapoaka miloko, amin'ny idyllic sambo potika, kafe kafe, sy trano fisakafoanana kilasy mirakitra sisiny roa. Ity tanàna ity mirehareha quirky Copenhagen ny rivo-piainana sy ny hipster Vibe ary koa ny tsara tarehy indrindra arabe tao an-tanàna. No trip to Copenhagen is complete without a stroll and a photo here though.
A mandeha (na mitaingina sambo) midina eny an-dalana tsara tarehy ity tany Venise dia toy ny maka ny fitsidihana ny avana. Burano dia nosy iray tao anatin'ny Venetian Lagoon, fa raha tsara vintana ianareo efa sendra ampy mba hitsidika dia ho hangorona ny fakan-tsary (finday) avy hatrany. Ny trano sy ny lakandrano mandeha mahitsy tsara tarehy amin'ny alalan'ny izany ho azy dia ny hilaza. Io no karazana toerana izay afaka manainga ny toe-tsain'olona amin'ny indray mipi-maso.
Makà hoe nandeha an 'izao tontolo izao-malaza East Side Gallery. Ny eny an-dalana miaraka amin'ny tena misokatra-rivotra Gallery voalalotra rehetra miaraka amin'ny sisa tavela ao amin'ny Berlin Wall. Misy ny fahafahana Insta galore arabe midina io ho toy ny zavakanto dia mampino, fa izany ihany koa bolo Berlin fampahatsiahivana tantara sy ny Ady Mangatsiaka.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “10 Streets tsara indrindra In Eoropa To Explore” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-beautiful-streets-europe%2F%3Flang%3Dmg – (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)